တယ်လီနောမြန်မာ၏ တရားဝင်သတင်းများကို ဤနေရာမှ ရယူလိုက်ပါ။
23 Dec, 2021 - Yangon | Press Release
တယ်လီနောစာသင်ခန်းမှတစ်ဆင့် စွန့်ဉီးတီထွင်သူများနှင့် ကလေးငယ်များ အပါအဝင် သုံးစွဲသူ တစ်သန်း သင်ယူလေ့လာရေးအခွင့်အလမ်းများ ရရှိ
စိန်ခေါ်မှုသစ်များဆက်တိုက် ရင်ဆိုင်နေရသော စွန့်ဉီးတီထွင်သူများ နှင့် ကပ်ရောဂါကာလအလွန် ဖြတ်သန်းရမည့် ကလေးငယ်များအတွက် မျက်ခြေမပြတ်ရှိနေစေရန်အတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာသင်ယူမှုက အလွန်အမင်းအရေးပါသည်။ အားလုံးအတွက် ပညာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး အခွင့်အလမ်းများ ထောက်ပံ့ပေးရန် တယ်လီနောစာသင်ခန်းကို စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး လတ်တလောအချိန်အထိ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ လူတစ်သန်းကျော်က ၎င်းတို့၏ မိုဘိုင်းများကတစ်ဆင့် တယ်လီနောစာသင်ခန်းကို ဝင်ရောက် လေ့လာ အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။
08 Nov, 2021 - Yangon | Press Release
အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများအနေဖြင့် မိမိမိုဘိုင်းဖုန်းမှတစ်ဆင့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှာဖွေနိုင်မည်
တယ်လီနောမြန်မာမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူများအတွက် “Find.Job” အမည်ရှိ ဆန်းသစ်တီ ထွင်မှုရှိသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှေ့ပြေး အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးကဏ္ဍသစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်ပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ဝန်ဆောင်မှုများကို ဦးဆောင်လျက်ရှိသည့် MyJobs နှင့် လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး ၎င်းကဏ္ဍသစ်ကို ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကဏ္ဍများစွာပါဝင်ပြီး ကျော်ကြားလှသည့် မိုင်တယ်လီနောအက်ပလီကေးရှင်းတွင် အထက်ပါ ဆန်းသစ် တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ထည့်သွင်းမိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ်ရှာဖွေနေသူများအကြား ပေါင်းကူးတံတားသဖွယ် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် တယ်လီနောက ရည်ရွယ်ပါသည်။
08 Sep, 2021 - Yangon | Press Release
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လတ်တေလာဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများအကြား နိုင်ငံ့အနှံ့ရှိ တယ်လီကွန်မြူနီကေးရှင်း နက်ဝေါ့များကို ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်သည့် ဖြစ်ရပ်များ စဥ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတိုက်ခိုက်ခံရသည့် နက်ဝေါ့ခ်တာဝါများသည် အော်ပရေတာများအကြား မျှဝေသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး အချို့နက်ဝေါ့ခ်တာဝါတိုင်များတွင် တယ်လီနော စက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင် ထားရှိပါသည်။
Please mention about media contact in breif.
About2lines would be oaky.
See Contact Detail